Isikhokelo esigqibeleleyo sokulinganiswa kwe-IP engenamanzi-IP44, IP54, IP55, IP65, IP66, IPX4, IPX5, IPX7 Usenokuba ukhe wadibana neemveliso ezinophawu kuzo okanye kwiipakethe zazo, njenge-IP44, IP54, IP55 okanye ezinye ezifanayo. Kodwa uyazi ukuba zithetha ntoni ezi zinto? Ewe, le yikhowudi yamazwe aphesheya ...Funda ngokugqithisileyo »
Sonke siyazibona izingqinisiso kwizixhobo ezingangeni manzi, izixhobo ezinganyangekiyo ngamanzi kunye nezixhobo zokugxotha amanzi ziphoswa kwimveliso ye-elektroniki. Umbuzo omkhulu ngulo: Uyintoni umahluko? Maninzi amanqaku abhaliweyo malunga nesi sihloko, kodwa sicinge ukuba sizakuphosa iisenti zethu kunye ...Funda ngokugqithisileyo »
Uyintoni Isiseko Somgangatho? Isiseko somgangatho sisamkeli seplagi esikumgangatho. Olu hlobo lwesokethi lunokwenziwa kwiintlobo ngeentlobo zeeplagi, kodwa zihlala zisetyenziselwa ukuqhagamshela ngombane, umnxeba, okanye intambo. Ukusetyenziswa kweziseko zomgangatho kulawulwa kakhulu ziikhowudi zokwakha kuninzi ...Funda ngokugqithisileyo »